बेलायतको स्कटल्याण्ड राज्यमा रहेका नेपालीहरुले दिएको ५ थान अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर नारायणी अस्पताललाई हस्तान्तरण बेलायतको स्कटल्याण्ड राज्यमा रहेका नेपालीहरुले दिएको ५ थान अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर नारायणी अस्पताललाई हस्तान्तरण Esimana.com || Simana Media Pvt. Ltd.
6/15/2021 गते 00 00 मा प्रकाशित 322 पटक पढिएको
कोभिड १९ को संक्रमणको हट स्पट बनेको बीरगंजको नारायणी अस्पतालमा मात्रै ७ सय भन्दा बढी संक्रमीत भर्ना भए । २६ प्रतिशतको हाराहारीमा बिराीको मृत्यु भयो ।
यस क्षेत्रका नागरिकको जीवन रक्षामा थोरै भएपनि योगदान पुगोस भनेर युनाइटेड किङ्गडम्सको स्कटल्याण्डमा रहेका नेपालीहरुले सहयोगमा कन्सन्ट्रेटर पठाएका हुन ।
त्याहाका नेपालीले २० वटा कन्सन्ट्रेटर नेपालमा उपलब्ध गराएका हुन । त्यस मध्य चितवनमा १० पोखरा बुटवल र बीरगंजमा पाँच पाँच वटा उपलब्ध गराइएको पत्रकार प्रकाश अर्यालले जानकारी दिनु भयो । कन्सन्ट्रेटरको मूल्य साढे सात लाख रुपैया रहेको बताइएको छ ।
कन्सन्ट्रेटर हस्तान्तरण गर्दै पत्रकार अर्यालले एनआरएन स्कटल्याण्डमा संगठीत नेपालीहरुले नेपालको अवस्थामा केही सहयोग गर्ने मनोभावका साथ काम गरेको बताउनु भयो । स्कटल्याण्डमा बस्दै आउनु भएका अर्यालले नेपालको सीमा शहर बीरगंज हट स्पट बनेको सुनेका थियौ त्यही भएर पनि केही मात्रमा हाम्रो सहयोग याहा पनि आइपुगोस भन्ने थियो यो समान हस्तान्तरण गर्न पाउदा सन्तोष लागेको छ भन्नु भयो ।
उहाँले स्कटल्याण्डका सहयोगी हात र नेपालमा ब्यवस्थापकीय सहयोग पुर्याउने सबैलाई धन्यवाद दिनु भयो ।
सोही अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सचिव दीपेन्द्र चौहानले स्कटल्याण्डका सबै नेपाल िदाजुभाईलाई आभार प्रकट गर्नु भयो ।
उहाँले तेश्रो भेरियन्टको कुरा पनि आइरहेको भन्दै सहयोगी हातहरुलाई सहयोग गर्न अझै अपिल गर्नु भयो । केन्द्रीय सदस्य के.सी.लामिछानेले नेपालको स्वास्थ्य संरचना बलियो नभएको अवस्थामा बिदेशमा रहनु भएका नेपालीले गर्नु भएको सहयोगले नेपालीहरुकोलागि ठुलो बल मिलेको बताउनु भयो ।
उहाँले कमजोर स्वास्थ्य संरचना भएको मुलुकमा स्कटल्याण्डमा रहनु भएका नेपाली दाजुभाईले उपलब्ध गराउनु भएको सहयोगले आशाको संचार गराएको भन्दै आभार प्रकट गर्नु भयो ।
अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर बुझ्दै बीरगंजको नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेण्डेण्ट डा. वीरेन्द्र प्रधानले स्कटल्याण्डका नेपाली दाजुभाई प्रति बिशेष आभार प्रकट गर्नुृ भयो । उहाँले समस्यामा परेका दाजुभाईले राम्रो उपचार पाउन भन्ने उद्धेश्यले उपलब्ध गराउनु भएको सहयोग प्रति मनैदेखी प्रशंसा गर्नु भयो । उहाँले यो सहयोग पूर्ण रुपमा सदुपयोग हुने बताउनु भयो ।